Ziziphi iindlela zokufumana i-backpink WordPress?
I-backlink ziyaziwa njengezixhumanisi ezingenayo okanye ezingenayo. Ezi nxu lumene kwiphepha elilodwa lewebhu kodwa zikhomba enye. Ngokuphakamisa inani lamanqaku angenayo, ukhulisa isayithi lakho ukuthandwa. Yingakho kuyindlela epheleleyo yokwandisa umzila we-intanethi kwaye yenza ukuba waziwa phakathi kwabasebenzisi. Inombolo kunye nemigangatho ye-backlink enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwiGoogle. Yingakho i-backlink isetyenziswe ngabakwa-webmasters ukwenzela ukwandisa isikhundla sewebsite kunye nokwenza i-website ibe ne-SEO-friendly. Ukuba isayithi ikhonjiswe nge-backlink multiple, kunokwenzeka ukuba iphandwe ngabasebenzisi.
Ziziphi izizathu zokudala i-backpink WordPress?
Ubungakanani kunye nemigangatho ye-backlink yinto ebalulekileyo ekwenzeni injini yokukhangela. Izixhumanisi zangaphandle zinamanye amancedo kwi-website ukulungiswa ngokutsala iindwendwe ezitsha kwisayithi kunye nangokunyusa izithuthi kumaphepha akho ewebhu. Badlala indima ebalulekileyo ekuphuculeni isiseko somlandeli kunye nokuphakamisa ulwazi lwe-brand. Ukongezelela, iziqulatho ezingenayo ziyanceda ngolu hlobo lokuba luphucula ukusebenza kwendawo kwaye ludibanisa isayithi kwezinye amanethiwekhi.
Indlela yokongeza i-backlink kwi-WordPress?
Abaphathi beWebhsayithi abaqhuba imithombo emininzi yewebhu ngexesha elilodwa bangasebenzisa ngokugcwele i-backlink ukuze baxhumane nendawo nganye. Yindlela epheleleyo yokunyusa i-traffic kuwo onke amawebhusayithi. Nangona kunjalo, abanye abanikazi bewebhusayithi bazididekile ukwenza i-backlink ngokuchanekileyo. Yingakho siqokelela amacebiso athile anokukunceda ukwakha i-backlink efanelekileyo kwi-WordPress:
Ukushintshisa i-backlink nezinye iisayithi
Indlela elula neyendalo ukudala i-backlink efanelekileyo kukutshintshana namanye amasayithi. Unokuqhagamshelana ne-webmaster kwi-niche yakho kwaye useke kunye naye ubudlelwane obuzuzisayo. Unokumcela ukuba abeke i-backlinks yakho kwisayithi yakhe kunye nemeko oya kwenza ngayo enye inye kuye. Le ndlela yokuphumelela ifanelekile wena kunye newebhusayithi yakho yeqabane.
Kubalulekile ukuxelela abathengi bakho malunga neenveli zakho kunye noshintsho kwishishini lakho.Kufuneka uvelise olu lwazi ngokukhawuleza kwaye ulungelelanise kwaye ulusasale kwii-arhente ezahlukeneyo zokukhupha. Ukushicilelwa okushicilelweyo okulungileyo kubhengezwa ngamanye amaziko eendaba eziphezulu eziza kukuvuza njengombhali nge-backlink for free.
Enye indlela ephilayo yokwakha izixhumanisi kubhala ubungqina bokuba izinto okanye izinto ozithandayo. Ukuba ubungqina bakho buhlangabezana nemigangatho efunekayo, lunokuboniswa kwiwebhusayithi. Ngenxa yoko, umbhali uya kufumana i-backlink efanele. Ukuhlaziywa komkhiqizo kunxibelelwano kubalobi abakhayo kwaye benze ubungqina obuqinisekileyo.
Sebenzisa iziteshi zoshishino loluntu
Unokufumana inzuzo ekusebenziseni iiplathi zeendaba zoluntu njenge-Twitter, Facebook, Twitter, Google+ kunye nabanye. Unokwenza apha i-akhawunti yakho yebhankini kwaye ungeze iziqhagamshelana nazo ezikhomba kwiwebhusayithi yakho. Ukutsala abathengi abaninzi, unokufuna ukuqhubeka ngokubonelela abathengi bakho ngomxholo omtsha kunye ochaphazelekayo kunye nokunikezela okungafaniyo, iimincintiswano, iividiyo, kunye neentlobo Source .